Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Awards » Yanina Gavrilova waa geesigii ugu horeeyay ee dalxiiska Yukreeniyaan
Awards • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Safarka • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Ukraine War Deg Deg Ah • Wararka Mareykanka • Wtn
Hoolka Halyeeyada Dalxiiska Caalamiga ah wuxuu ku furan yahay magacaabis kaliya si loo aqoonsado kuwa muujiyey hoggaan aan caadi ahayn, hal -abuurnimo, iyo ficillo. Geesiyaasha Dalxiiska ayaa qaada talaabada dheeraadka ah. Yanina Gavrilova hadda waa qofkii ugu horreeyey ee ka socda Ukraine ee la casuumo, waxayna aqbashay inay noqoto Shabakadda Dalxiiska Adduunka inay noqoto geesi dalxiis.
Shabakadda Dalxiiska Adduunka waxay aqoonsatay Marwo Yanina Gavrilova inay ku biirto kooxda gaarka ah ee Geesiyaasha Dalxiiska.
Tan iyo 2016 Ms. Gavrilova waxay ahayd Madaxa Guddiga Midawga Madaniga, Ururka Hagaha Dalxiisayaasha Yukreeniyaan
Yanina Gavrilova waa qoraaga koorsooyinka tababarka masaafada ee ku takhasusay macluumaadka, maareeyayaasha, iyo wakiillada Bulshooyinka Dhulka ee ku jira horumarinta dalxiiska iyo meelaha dalxiiska ee maxalliga ah “Bilowga guusha leh ee dalxiiska,” tababarka koorsada hagayaasha dalxiiska - “Ururka iyo dhaqanka safarada gastronomic -ka ”.
The "Ururka Dalxiisayaasha Yukreeniyaan Yukreeniyaan" waa ururka ugu horreeya ee ganacsiga ee Ukraine. Tan iyo bilowgii masiibada COVID-19, “Ururka Hoggaamiyayaasha Dalxiisayaasha Yukreeniyaan” n ayaa kordhiyay xubinnimadeeda.
-Tababaraha edbinta dalxiiska iyo hababka waxbarashada dadka waaweyn, tababaraha DVV-International.
- Xubin ka tirsan kooxda khubarada ah ee Wakaaladda Gobolka ee Horumarinta Dalxiiska ee Ukraine (DART).
- Wakiilka Ukraine ee Midowga Yurub ee Ururada Hagaha Dalxiiska iyo Xiriirka Adduunka ee Ururada Hagaha Dalxiiska.
Shantii sano ee la soo dhaafay, Yanina Gavrilova waxay soo saartay buugag habaysan:
- farsamo ahaan abaabulka xarumaha macluumaadka dalxiiska,
- diyaarinta hagaha dalxiiska ee farsamada fasiraadda hidaha, dhaqanka, iyo taariikhda.
Waxqabadka khabiir dheeraad ah:
2014-2021 Yanina Gavrilova waxay ka qayb qaadatay shaqada qabanqaabinta guddiyada in ka badan 50 siminaaro iyo la-talin, aqoon isweydaarsiyo, shirar, iyo goleyaal loogu talogalay khabiirada macluumaadka, hagaha dalxiiska, iyo maareeyayaasha:
- 2021 Mashruuca USAID ERA Ukraine, La -taliyaha Xarunta Macluumaadka Dalxiiska ee Badda Azov;
-tababar u qabtay ku takhasusay TIC ee Kyiv ee 2016-2018;
- wuxuu ka qaybgalay sidii af -hayeenkii ugu muhiimsanaa Shirweynihii Koowaad ee Wakiilada TIC ee 2016 Lviv;
-2019-2020 waxay wadatashiyo taxane ah u samaysay maamulayaasha TIC-yada Dnipro, Chernihiv, Kherson;
- sannadka 2021 -ka wuxuu la -tashaday xirfad -yaqaannada dalxiiska ee aasaaska TIC ee Olevsk;
-2012-2013 Khabiirkii mashruuca Midowga Yurub “Kala-duwanaanshaha iyo taageerada dalxiiska ee Crimea”;
-2010-2012 Khabiir ku ah shaqada xarumaha macluumaadka dalxiiska ee mashruuca Chemonics International Inc, USAID / LINK;
- 2012. Horumariyay oo u sameeyay layliyo khabiirrada TIC ee Yukreeniyaan ee Estonia iyo Sweden.
Magacaabista la helay jawaab -celintaan waxaa ka mid ahaa: Yanina waa qof la yaab leh oo ku bixisa xooggeeda oo dhan iyo tamarteeda oo dhan horumarinta dalxiiska. https://en.uaguides.com
Yanina ayaa hadda ku qoran geesiyaal.fasax waxayna fursad u heli doontaa in loo doorto geesiga sanadka ee Dalxiiska. Marna lacag ma jirto.
Sannadka ama Gaarka ah Abaalmarinta Geesinimada Dalxiiska waxaa loo soo bandhigayaa xubnaha la soo xulay ee Hoolka Halyeeyada Dalxiiska Caalamiga ah. Waxay u furan tahay xubnaha iyo xubnaha aan ahayn Shabakada Dalxiiska Adduunka. Wax kharash ah ma jiro.
The Abaalmarinta Geesiga Sanadka ee Abaalmarinta waxaa loo soo bandhigay xubno la soo xulay oo ka mid ah Hoolka Halyeeyada Dalxiiska Caalamiga ah.
Waxay qaadataa ugu yaraan laba magacaabid in loo tixgeliyo aqoonsigan. Mid baa noqon kara is-magacaabid. Qof kasta ayaa magacaabi kara ama lagu magacaabi karaa www.heroes.travel